हवाई एयरलाइन्स: जुन ट्राफिक 7.4..XNUMX% बढ्यो
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » हवाई एयरलाइन्स: जुन ट्राफिक 7.4..XNUMX% बढ्यो
जुलाई 8, 2009
होनोलुलु - हवाई एयरलाइन्स इंक। मंगलबार जूनमा यसको ट्राफिक 7.4..XNUMX प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
हवाई एयरलाइन्सले गत महिना 701.6०१. million मिलियन राजस्व यात्री माईल रेकर्ड गर्यो, जुन २०० 653.4 मा उडान गरिएको 2008 XNUMX..XNUMX मिलियन राजस्व माईलहरूको तुलनामा। एक राजस्व यात्री माईल एक उद्योग इकाई हो जुन एक भुक्तानी गर्ने यात्रीले एक माईल उडान गरेको मापन गर्दछ।
एयरलाइन्सले क्षमता3प्रतिशतले बढाएर 825.3२801.5..XNUMX मिलियन उपलब्ध सीट माईलहरू XNUMX०१. million मिलियन उपलब्ध सीट मीलहरू बाट पुर्‍यायो।
लोड फ्याक्टर, वा ओब्गेन्सी rose१..85 प्रतिशतबाट बढेर 81.5 XNUMX प्रतिशतमा पुगेको छ।
वर्षको पहिलो छ महिनाको लागि, हवाईले भने ट्राफिक १ प्रतिशतले 1.०१ अर्ब राजस्व यात्री माईलमा पुगेको छ।
क्षमता 3.3..4.83 प्रतिशतले वृद्धि भई 1.9 अर्ब उपलब्ध सीट माईल पुगेको छ जबकि कब्जा १. 83.1. प्रतिशत बिन्दुले घटेर XNUMX XNUMX.१ प्रतिशतमा छ।
बुडापेस्ट एयरपोर्ट: नवौं रनवे रन चालू छ!